Nọvemba 2021 – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Monthly Archives: Nọvemba 2021
Ihe atụ Fantasy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Nke 2021 Ndị na-agbanwe egwuregwu kacha mma nke Google Play na Hong Kong, Macau na Taiwan, Egwuregwu mkpanaaka na-abaghị uru nke 3D mbụ, Fantasy Figure abanyela n'ụdị! Ebe a, ị ga-abụ ihe atụ’ nna ukwu, ma nweta ọmarịcha njem n'ime obere ụwa ha. Atụmatụ egwuregwu 3D dị ntakịrị akụkọ ntụgharị ahụ dabere na anụ ahụ (PBR) teknụzụ na-eweghachi inch ọ bụla… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Fantasy, Figure
Rọket Njikọ Sideswipe – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na ndị na-eme Rọket Njikọ, e chegharịala bọọlụ ụgbọ ala maka ngwaọrụ mkpanaka! Jiri njikwa mmetụ nwere ọgụgụ isi banye egwuregwu ahụ. Ọ dị mfe dị ka itinye bọọlụ n'ime ụgbụ nke onye iro gị, mana kpachara anya! Onye iro gị ga-anwakwa ịka akara. Kụta nkwalite gị ka ọ gaa ọsọ ọsọ, ma ọ bụ jiri ya nweta… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, League, Rọketi, Sideswipe
Wildshade: agbụrụ ịnyịnya fantasy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ị nụla banyere ịnyịnya Wildshade? Zụlite ịnyịnya nrọ gị na ihe karịrị 40 nde nhọrọ, kwadebe ịnyịnya ọ bụla na tack dabara adaba, ma gosi na ị tozuru oke maka igwe anụ ọhịa Wildshade. Nweta asọmpi ịgba afa na ọmarịcha, njem juru ụwa! Ogologo oge gara aga, otu ugboro n'afọ na nso obodo Wildshade, ihe anwansi were… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Fantasy, Horse, Races, Wildshade
Ihe na-emebi afụ - Ebumnuche iji merie – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ọ dị mma! You’ve found an addictive classic bubble egwuregwu agbapụ.《Bubble Breaker-Aim To Win》 bụ egwuregwu nwere ike iwepụ nchegbu gị ngwa ngwa.. Gbapụta bọọlụ niile mara mma wee kụọ ebumnuche iji mezue ọkwa ahụ! Ọ dị mfe igwu egwu mana ọ siri ike ịmara. Meri ọtụtụ narị ọkwa ka ịbọ ọbọ maka talent gị. Ụdị na-enye ume ọhụrụ na nke nkịtị… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: BreakerAim, Bubble, CheatsHack, WIN
Egwuregwu Poppy : Oge egwuregwu Huggy Wuggy Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Nnọọ na oge egwu wuggy poppy bụ egwuregwu egwu egwu ebe ịkwesịrị ịzenarị animatronics nke na-aga furor ga-adị ndụ na njem egwuregwu egwu egwu a.. Atụmatụ:– Eserese 3D dị ịtụnanya– Ogo mkpanaaka njikwa– Ụjọ ịlanahụ na-ezo ebe niile– Map ka ịhazi njem gị ọzọ– Ọtụtụ isi na mods– Ọ dị mfe ịkpọ oge egwuregwu poppy… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, egwuregwu, Huggy, Gwuo, Oge egwuregwu, Poppy, Wuggy
Ogbenye Agwo: Ị nwere ike inyere ya aka Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Akụkọ ahụ gbasara agwọ furu efu nke malitere njem ya ịchọta ezinụlọ ya nwere ọtụtụ ihe ọma na ihe na-atọ ụtọ na njem a. Na njem, Ị ga-arụ ọrụ dị ka agwọ iji zuo ohi na ịghagharị ihe ọ bụla mana kpachara anya maka ihe dị ize ndụ emetụla ha aka ma ọ bụ na ị ga-... GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Poor, Snake
okirikiri zuru ike: Ndị aghụghọ nka mgbagwoju anya kwa ụbọchị&Mbanye anataghị ikike
Ihe mgbagwoju anya Circle Relax block na-ebunye egwuregwu mgbagwoju anya ihe mmịfe riri ahụ. Kpatụ ma ọ bụ slide taịlị ndị ahụ iji dozie egwuregwu mgbagwoju anya. Gwuo site na iji ọmarịcha foto agwaetiti ebe okpomọkụ arụrụla, ma ọ bụ mepụta mgbagwoju anya na-akparaghị ókè. Kedu ngwa ngwa ị nwere ike mezue egwuregwu ahụ? Atụmatụ ezumike gburugburu:• Ngụ oge egwuregwu ma na-ebugharị stats counter iji tụọ ọganihu nka. • mgbagwoju anya efu… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Art, CheatsHack, Circle, Daily, Ihe mgbagwoju anya, Zuo ike
Oge egwuregwu poppy Huggy Wuggy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Kpọọ ụdị egwuregwu egwu egwu oge egwu poppy 2, bụ njem na-akpali akpali, juputara na obi uto. Akụkụ ụkpụrụ na oge egwuregwu Poppy ama ama. N'ime egwuregwu oge egwuregwu poppy dị ịtụnanya ị ga-adị ndụ wee merie wuggy mmakọ. Enwere ọtụtụ mpaghara ị ga-achọpụta n'ime oge egwuregwu poppy, Ohere bụ kpam kpam adịghị agwụ agwụ. gwuo egwu oge egwuregwu poppy zuru oke!Atụmatụ dị ịtụnanya!1- Na-eku ume… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Huggy, Oge egwuregwu, Poppy, Wuggy
Otu Deck Dungeon – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
"Dịka anyị tụrụ anya n'aka Handelabra, ụdị dijitalụ ahụ enweghị ntụpọ." – David Neumann, StatelyPlay.com "Otu Deck ulo mkporo na-enye ọtụtụ egwuregwu egwuregwu atụmatụ." – Christian Valentin, AppSpy.com "Onye na-akwa anụ ụlọ mkpọrọ dị ịtụnanya nwere mkpebi dị mkpa a ga-eme n'oge ọ bụla." – PixelatedCardboard.com ================================= Oku njem njem… mana ị naghị enwe oge iji… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Deck, Dungeon
Egwuregwu Tebụl egwuregwu – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Nkọwa ọdịnaya:Nke a bụ ihe ngosi n'etiti onye mmeri na onye mmeri, na asọmpi Tebụl kpụ ọkụ n'ọnụ na-aga ibido. Ị bụ onye ọkpọ egwuregwu ping-pong mara mma ma banyela n'asọmpi ping-pong. Ebe a,n'ebe a,ị ga-egwu na-alụ ọgụ na ndị ọzọ magburu onwe table tennis Player.Asọmpi na-anabata usoro knockout, na enwere ụzọ abụọ… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Battle, CheatsHack, Table, Tennis
← Ihe ochie